Hiccups (ကြို့ထိုးခြင်း) - Hello Sayarwon
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ 13/08/2017 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Hiccups (ကြို့ထိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
သင့်ရင်ဘတ်ပိုင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းကို ခြားပေးထားတဲ့ ရင်ဝမ်းခြား ကြွက်သားကြီး အလိုလျောက် ညှစ်နေတာကို ကြို့ထိုးတယ်လို့ ခေါ်ပြီး ဒီရင်ဝမ်းခြားကြွက်သားဟာ အသက်ရှုတာကို ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြို့ထိုးတာဟာ သင့်ကို နေရထိုင်ရခက်စေပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ ဘာမှမရှိပါဘူး။
Hiccups (ကြို့ထိုးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ။
ကြို့ထိုးတာဟာ အရမ်းအဖြစ်များပြီး လူတိုင်းနီးနီးဟာ တခါလောက်တော့ ကြို့ထိုးဖူးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြို့ထိုးတာဟာ ကလေးငယ်တွေအပါအဝင် အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
Hiccups (ကြို့ထိုးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
ကြို့ထိုးတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့အသံလေးဟာ တခုတည်းသော လက္ခဏာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သားညှစ်လို့ တုန်သွားတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အသံကြိုးတွေကို သွားလှုပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာမို့ “အစ်”ခနဲ အသံလေးထွက်လာတာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ကြို့ထိုးတာရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြို့ထိုးတဲ့အသံထွက်မလာခင်မှာ သင့်ရင်ဘတ်၊ဝမ်းဗိုက် ဒါမှမဟုတ် လည်ချောင်းထဲမှာ အနည်းငယ်တင်းကြပ်သွားသလိုလည်း ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြို့ထိုးတာဟာ လူအများစုမှာ မိနစ်အနည်းငယ်ကနေ နာရီပိုင်းလောက်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတရံ ဒီထက်လည်း ပိုပြီးကြာနိုင်ပါသေးတယ်။၄၈နာရီထက်ပိုကြာကြာကြို့ထိုးနေရင် ဒါကို တာရှည်ကြို့ထိုးခြင်း (Persistant hiccups) လို့ခေါ်ပြီး တစ်လထက်ပိုပြီး ဆက်တိုက်ကြို့ထိုးနေရင်တော့ အထိန်းအကွပ်မဲ့ ကြို့ထိုးခြင်း (intractable hiccups) လို့ခေါ်ကာ သူတို့နှစ်မျိုးလုံးဟာ မောပန်းတာ၊အိပ်မရတာ နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကာလကြာရှည်ကြို့ထိုးတာမျိုးတွေဟာ ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတခုခုရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးရပါမယ်။
သင်ကြို့ထိုးနေတာ ၄၈နာရီထက် ပိုကြာပြီဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် အိပ်တာ၊စားတာ၊အသက်ရှုတာ အစရှိတဲ့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားသွားလာနေထိုင်မှုတွေကို ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါပြီ။ ကြို့ထိုးတာနဲ့အတူ ဗိုက်အရမ်းနာ/အောင့်တာ၊ဖျားတာ၊အသက်ရှုမဝတာ၊အန်တာ၊လည်ချောင်းထဲ တင်းကြပ်နေတာ၊ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာ ဒါမှမဟုတ် ချောင်းဆိုးသွေးပါတာမျိုး ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသရပါမယ်။ သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Hiccups (ကြို့ထိုးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ။
သင့်ရဲ့ ရင်ဝမ်းခြားကြွက်သား ညှစ်တာကြောင့် ကြို့ထိုးရပါတယ်။ တခါတရံ အစားအသောက်တွေ အလွန်အကျွံစားရင်လည်း ကြို့ထိုးတတ်ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့်
ဂက်စ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေ သောက်ခြင်း။
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများခြင်း။
ပီကေဝါးရင်း သို့မဟုတ် သကြားလုံးစုပ်ရင်း လေများမြိုချမိခြင်း။
ကာလကြာရှည်ကြို့ထိုးခြင်းဟာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေ အပါအဝင် အခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်နဲ့ ကျောရိုးပင်မအာရုံကြော ပြဿနာတွေ ။ ဥပမာ ကင်ဆာ၊ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်း၊လေဖြတ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရခြင်း။
ကျောက်ကပ်ပျက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အသက်ရှုနှုန်းမြန်ခြင်း။
ဦးခေါင်း၊လည်ပင်း နဲ့ ရင်ဘတ်က အာရုံကြောတွေ ထိခိုက်ခြင်း။
ထုံဆေး၊မေ့ဆေးကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေကြောင့်။
ယခုဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို ဆေးပညာအကြံပေးမှုနေရာတွင် အစားထိုးရန်မသင့်တော်ပါ။ ပိုမိုသောအချက်အလက်များရရှိရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပါ။
ကြို့ထိုးတာ ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
ယေဘုယျအနေနဲ့ ကြို့ထိုးတာဟာ ကုသစရာ မလိုဘဲ အလိုလိုပျောက်ကင်းတဲ့ အခြေအနေတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသော နောက်ခံအကြောင်းရင်းတခုခုကြောင့် ကြို့ထိုးတာဆိုရင်တော့ ကြို့ထိုးပျောက်ဖို့အတွက် အဆိုပါ အကြောင်းရင်း/ပြဿနာကို အရင်ကုသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား ကုသမှုတွေနဲ့ မသက်သာရင် ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းရင်းထူးထူးခြားခြား ရှာမရဖူးဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ ကြို့ထိုးတာကိုပဲ အဓိကထားကုသဖို့ သောက်ဆေးတွေ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးတွေထဲက တချို့က
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ကြို့ထိုးတာ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသေးပေမယ့် ကြို့ထိုးတာကို ကုသနိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းအများစုဟာ သွေးတွင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓါတ်ကို များစေပြီး ကြို့ထိုးတာကို ပျောက်ကင်းသွားစေပါတယ်။ ဆေးနည်းအချို့ကတော့
• အသက်အောင့်ထားပြီး တစ်ကနေ တစ်ဆယ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းရေတွက်ခြင်း။
• ရေအေးအေးတခွက်ကို အမြန်သောက်ချခြင်း။
• သကြား ဒါမှမဟုတ် ပျားရည်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတဇွန်းစားခြင်း။
• စက္ကူအိတ်ထဲ အသက်ရှုသွင်း/ရှုထုတ်လုပ်ခြင်း။
အကယ်၍သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်သင်တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Diseases and Conditions: Hiccups. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hiccups/basics/definition/con-20031471. Accessed August 12, 2016.
Hiccups-topic overview. http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/hiccups-topic-overview. Accessed August 12, 2016.
အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ မှားသိထားလဲ